Tag: fividianana mpanjifa | Martech Zone
Tag: fahazoana ny mpanjifa
Alarobia, Septambra 30, 2020 Alarobia, Septambra 30, 2020 Jeremy Levy
Ny angona lehibe dia tsy zava-baovao intsony eo amin'ny tontolon'ny asa. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mihevitra ny tenany ho toy ny data-driven; Ireo mpitarika teknolojia dia nanangana fotodrafitrasa fanangonana angona, manadihady amin'ny alàlan'ny angon-drakitra ireo mpanadihady ary manandrana mianatra avy amin'ireo angona ireo mpivarotra sy mpitantana ny vokatra. Na eo aza ny fanangonana sy fanodinana angona betsaka kokoa noho ny hatramin'izay, tsy mahita fahitana sarobidy momba ny vokatr'izy ireo sy ny mpanjifany ny orinasa satria tsy mampiasa fitaovana mety hanarahana ny mpampiasa amin'ny dian'ny mpanjifa iray manontolo izy ireo.
Tombontsoa 10 amin'ny programa tsy fivadihana sy valisoa ho an'ny mpanjifa
Zoma, Aprily 24, 2020 Zoma, Aprily 24, 2020 Douglas Karr
Miaraka amin'ny ho avy ara-toekarena tsy azo antoka, zava-dehibe ny fifantohan'ny orinasa amin'ny fitazonana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanandramana mpanjifa miavaka sy valisoa noho ny tsy fivadihana. Miara-miasa amin'ny serivisy fanaterana sakafo isam-paritra aho ary ny programa valisoa nomen'izy ireo dia mitohy mitazona hatrany ny mpanjifa miverimberina. Antontan'isa momba ny tsy fivadihan'ny mpanjifa, hoy ny Experian's Whitepaper, ny fananganana ny tsy fivadihana marika amin'ny tontolon'ny lakandrano: 34% amin'ny mponina amerikana dia azo faritana ho tsy fivadihan'ny marika 80% amin'ireo tsy mivadika amin'ny marika milaza fa
Mpivarotra efa za-draharaha no mahatakatra ny tombony azo avy amin'ny hetsika. Manokana, amin'ny habaka B2B, ny hetsika dia mitarika fitarihana betsaka kokoa noho ny hetsika marketing hafa. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny fitarihana dia tsy mivadika fivarotana, ka mamela fanamby ho an'ny mpivarotra hamoaka KPI fanampiny hanaporofoana ny sandan'ny fampiasam-bola amin'ny hetsika ho avy. Raha tokony hifantoka tanteraka amin'ny fitarihana izy ireo, ny mpivarotra dia tokony handinika ireo metrika izay manazava ny fomba nandraisan'ny mpanjifa mety, mpanjifa ankehitriny, mpandalina ary